Logitech MX Keys uye MX Master 3, kuswedera padhuze nekukwana | Ndinobva mac
Logitech MX Keys uye MX Master 3, kuswedera padhuze nekukwana
Isu takaedza izvo zviviri zvitsva zveLogitech zvigadzirwa zveMacs edu: iyo MX Keys keyboard uye MX Master 3 mbeva, zvigadzirwa zviviri zvakasimbiswa sereferensi yemusika uye zvigadzirwa zvekurohwa nechero mhando, kumisikidza bha moh kumusoro. Hunhu, nyaradzo uye epamberi maficha atinokurukura pazasi.
Kubatana kweLogitech uye makiyi uye makonzo emakomputa edu kwakanyanya zvekuti zvinoita sekunge kwakaoma kufunga nezve keyboard kana mbeva uye kwete kungoerekana wafunga nezve inozivikanwa zita. Iwo makore eruzivo mune ino chikamu, ayo anoratidzwa mune ayo zvigadzirwa, achiwedzera kunatswa uye aine mabasa aisatombo fungidzira makore mashoma apfuura.. Iyo nyowani MX Keys kiibhodhi uye MX Master 3 mbeva ndizvo zvitsva zvinoburitswa izvo zviri kuswedera padyo nekuswedera pakukwana.
1 MX Keys kiibhodhi
2 MX Mudzidzisi 3
3 Logitech Sarudzo, iyo software inovhara denderedzwa
MX Keys kiibhodhi
Kana iyo Logitech Craft keyboard (iyo yatakambokurukura mune izvi link) iwe waifarira, asi mutengo wayo waitaridzika kunge wakanyanya kukwirira (kunyangwe uchikodzera), iyi Logitech MX Keys ndizvo chaizvo zvawanga uchitsvaga. Wenhaka yekugadzirwa uye zvigadzirwa zvemukoma wake mukuru, inogovera nehunhu hwayo vhiri uye mukudzoka inotipa iwo mutengo unoyevedza kune avo vaisazowana zvakawandisa kubva pachinhu ichi cheCraft. Asi Logitech haana kuda kudzikisa iota imwe mune mamwe maficha, uye anotipa 100% premium keyboard.
Mushure megore nehafu ndichishandisa iyo Logitech Craft mazuva ese neMac yangu handina kuona mutsauko mudiki neiyi MX Keys. Iyo keyboard ine hunyanzvi hwekushandisa, yakasimba kwazvo patafura Kutenda kune yayo esimbi dhizaini uye yakanaka rutsigiro pamusoro, makiyi acho eyakajairwa saizi, concave uye nekadiki asi yakakwana kufamba kuti uve nekunzwa kwakanaka kana uchitaipa. Yakazara khibhodi ine manhamba keypad, akazara makoni, uye ekuwedzera mashandiro makiyi ayo anokubatsira iwe kuti zviitwe zvinhu nekukurumidza zvakanyanya. Inoenderana zvakakwana kuWindows uye macOS, iine makiyi eesisitimu yega yega.
Iyo keyboard yeBluetooth, asi inogona zvakare kushanda kuburikidza neLogitech's Unifying system nekuda kweiyo inosanganisirwa USB adapta. Ini ndinokurudzira iyi yechipiri nzira yekubatana, yakagadzikana uye inondipa ini kunzwa kuti bhatiri rinogara kunyange rakareba, zvirinani kwenguva yakareba sekunge ndashandisa iyo Logitech Craft. Uchishandisa imwe yemaitiro maviri iwe unogona kubatanidza kusvika kumatatu machena nekuda kwezviyeuchidzo zvaro zvitatu, uye kuchinja pakati pavo inyaya yekutsikirira bhatani, izvo zvinokurumidza uye zvakapusa. Kana iwe uchiwanzoshandisa yako iPad kana MacBook ine iMac yako, unogona kushandisa iyo imwechete keyboard kune ese madhizaini.
Chimwe chiitiko cheiyi keyboard ndeye backlight, inogadziriswa musimba (kwete muvara), uye ne sensor inoita kuti igone kushanda chete pazvinenge zvichidikanwa, nokudaro ichiwedzera hupenyu hwebhatiri. Inogona kugadziriswa mukusimba pamurume, uye Zvinofadza kuona mashandiro ebhobhobhoyo anoshanda, nekungounza mawoko ako pamwechete iwo anoita kuvhenekera kwemakiyi, pasina kana kumboda kuvadzvanya. Paunenge iwe waedza backlit keyboard, iwe hauchanzwisise kuti ungadai wakambove sei usina iyo zvisati zvaitika, zvisingafungidzike kuti Apple haina kuisanganisira iyo mumakhibhodi ayo.
Kudzoreredza iyo keyboard kunoitwa uchishandisa USB-C tambo, yakaiswa mubhokisi. Iyo ine kuzvimiririra kwemazuva angangoita gumi nekushandisa "zvakajairika" uye kushandiswazve backlightingMune yangu nyaya, ndaiti nditaure chimwe chinhu, nekuti pane mazuva andisingashandise, kunyangwe ini ndisina kumboidzima pane switch inowanika pairi. Iyo keyboard inongoerekana yapinda yakaderera simba modhi kana isiri kushandiswa kwechinguva, uye inomuka otomatiki iwe uchangobata kiyi. Kana iwe ukadzima backlight, iko kuzvimirira kunosvika pamwedzi mishanu maererano naLogitech, chimwe chinhu chandisina kusimbisa.
MX Mudzidzisi 3
Iyo MX Master 3 mbeva ndiyo yakakwana mubatsiri kune iyo keyboard, kana isina iyo. Izvo zvinongokwana uye mureza wechigadzirwa. Mushure meinopfuura gore ndichishandisa MX Master 2S handigone kutaura zvinopfuura zvishamiso zveiyi inonakidza mbeva, uye mutsivi wayo anowana nhaka yakanakisa uye anovandudza zvimwe zvinhu. Ergonomics, nyore kushandisa, kuvimbika, kugadzirisa, zvigadzirwa zveprimiyamu uye kuwana kune zviuru zvezvinhu zvinokurumidza… Ini ndinogona kungofunga nezvedambudziko diki nembeva iyi: ivo vatsiva majaira echiratidzo maLED neimwe LED iyo isingakuratidze huwandu hwebhatiri rasara. Kune zvimwe zvese, zvakataurwa: kukwana.
Logitech yakashandura zvishoma dhizaini dhizaini kubva kune yakatangira kuti ivandudze ergonomics, uye yawana chinzvimbo chakanakisa chemaoko, icho chinobatsirwa nehurongwa hutsva hwemabhatani padivi, hunowanikwa, uchivandudza mashandisiro ayo. Kana iwe wajaira kune yakajairwa-maviri-bhatani mbeva, kuona mbeva iine akawanda masimba kungamutsa kusahadzika, asi iwe unojaira kwavari mune isingasviki zuva rekushandisa. Mavhiri ayo maviri uye akawanda mabhatani akaiswa zvine hungwaru kuitira kuti mashandisirwo ayo ave akajeka kwazvo, uye kugona kwekugadzirisa madhiraivho kunoita kuti iwe uise zvese kwaunoona zvakakodzera.
Kunyanya kutaurwa kunokodzera vhiri rayo guru, rakagadzirwa nesimbi yakagadzirwa uye neunyoro mukushandisa kwayo kunozoita kuti uvenge chero imwe mbeva yaunotora. Yayo «Magspeed» system inokupa kufamba kwakanaka uye kwakatsetseka paunenge uchichinjisa zvishoma nezvishoma kana nekukurumidza uye paupamhi kana uchimhanya nekukurumidza. Magneti anodzora kutenderera kwevhiri uye zvinoenderana nesimba raunoshandisa pakutenderera, ichaziva mafambiro waunoda kufamba. Bhatani riri pamusoro pevhiri rinokutendera iwe kuti uchinje manyore, asi ini handinyatso rishandisa, otomatiki system inoshanda kwazvo.
Mabhatani makuru akapfava kusvika pakubata, asi hauzovamanikidza nekukanganisa. Vhiri remupumburu rinowira pachigunwe chako, uye unojaira kukurumidza, kurishaya nekukurumidza kana usisina. Pazasi payo pane mamwe mabhatani maviri anoenderana nemabasa aunoda. Kana izvi zvikaita sezvishoma kwauri, pane rimwe bhatani padivi reti mbeva iro rinogona zvakare kugadziriswa. Kune avo vasati vamboshandisa mbeva yerudzi urwu, zvinogona kunge zvisinganzwisisike kugadzirisa akawanda mabasa mune mbeva iyo yagara ichingoshandiswa chete kunongedza. Muchikamu chinotevera chekuongorora iwe unogona kuona maitiro avakaita uye nei chiri chinhu chinoita kuti iyi MX Master 3 ive yakanakisa mbeva pamusika.
Iyo mbeva yekubatanidza yakafanana neiyo shamwari keyboard, uye imwechete Unifying mudziyo pane yako komputa USB ichaitira iyo keyboard uye mbeva, kana iwe unogona kushandisa Bluetooth. Iyo ine ndangariro nhatu, senge iyo keyboard, uye kuchinja zvishandiso inyaya yekutsikirira bhatani riri pazasi. Iyo 4.000 DPI sensor inokupa iwe yakakura chaizvo uye inoshanda pane chero pamusoro, kunyangwe girazi. Nezve kuzvimiririra, unogona kunakirwa negonzo kwemazuva makumi manomweUye kana ukapera bhatiri, rugare rwepfungwa nekuti pamusoro pekugona kuishandisa netambo yekuchaja yakabatana, unogona kuishandisa kwemaawa matatu neminiti imwe chete yekuchaja. Nenzira, Logitech akawedzera USB-C kubhadharisa iyo MX Master 3, chimwe chinhu chinochisiyanisa nemhando yapfuura uye chinoongwa.
Logitech Sarudzo, iyo software inovhara denderedzwa
Hardware yakanaka haisi zvese, uye Logitech inoziva kuti zvigadzirwa zvayo zvakanaka zvinofanirwa kuperekedzwa neyakagadziriswa software kuti ifanane. Iyo Logitech Sarudzo app inobvumidza iwe kumisikidza zviito zvese zveaya "akakosha" mabhatani pane MX Master 3 mbeva uye MX Keys keyboard. Shandisa scroll scroll kuti uswededze, mabhatani epadivi kuti ubvise zviito kana kutora screenshots, famba pakati pematafura ... mhando yesarudzo dzinopihwa muapp iyi dzinoshamisa, uye unogona kugadzirisa dzimwe sarudzo zvichienderana neapp yauri. . Nenzira iyi iwe unozogona kuita mamwe mabasa muFinal Cut Pro uye mamwe akasiyana muIzwi. NaDuolink iwe unogona kuwedzera mashandiro embeva yako nekutsikirira iyo Fn kiyi pane yako keyboard, uye neLogitech Flow iwe unogona kuendesa mafaera pakati pemakomputa. Uye kuitira kuti usarasikirwe negadziriro yako kana waita zvese zvaunoda, unogona kugadzira makopi ekuchengetedza kubva kuchishandiswa pachawo.
Logitech yakagadzira zvigadzirwa zviviri zvitsva nekushandisa zvakanaka makore eruzivo rwekuita makadhibhokisi nemakonzo. MX Master 3 inotsiva yakatangira se "mbeva iri nani" uye nekhibhodi MX Keys yakwanisa kuchengetedza mhando yeiyo yakabudirira Logitech Craft nekubvisa iro vhiri vhiri iro risiri munhu wese raakashandisa uye nekupa mukutsinhana rakanakisa keyboard nemutengo wakaderera anoyevedza. Sega, asi zvirinani pamwechete, iyi keyboard uye mbeva ndiyo sarudzo yakasarudzika kune chero munhu arikutsvaga chimwe chinhu kupfuura izvo zvinogadzirwa zvigadzirwa..
Logitech MX Tenzi 3 € 89,99 (link)
Logitech MX Mazano € 85,74 (link)
Logitech MX Keys uye MX Master 3
Inonyaradza uye ergonomic
Kurumidza kuwana mabhatani
Feature gadziriso software
Chiratidzo chebhatiri risingachinjiki
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » Logitech MX Keys uye MX Master 3, kuswedera padhuze nekukwana
Ini ndoda kuziva kwekutenga wachi iyoyo kana kana ichingova muverengi ...
Nyowani vhezheni yeGhostery Lite ikozvino yave kuwanikwa
Tarisa bhatiri reAirPod paApple Watch